रेग्मी र पौडेलको जग्गा प्रक्रिया मिचेर सरकारीकरण गरियो « Postpati – News For All
रेग्मी र पौडेलको जग्गा प्रक्रिया मिचेर सरकारीकरण गरियो
माघ २६, काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले आधारभूत प्रक्रिया मिचेर ललिता निवासस्थित दुई जग्गाधनीको जग्गा सरकारीकरण गरेको खुलेको छ । यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
पौडेलले कसरी पाए ?
राणा परिवारले जग्गा फर्काएपछि २०५६ सालमा उनीहरूका जग्गामा मोही भएको दाबी गर्नेहरूले समेत जग्गा पाए । भूमाफिया भनी किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले आफ्नो र परिवारको सदस्यका नाममा जग्गा लिए । तहगत रूपमा बिक्री हुँदै गर्दा त्यो जग्गा विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा दर्ता भयो ।
जग्गा कित्ताकाटको ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने हो भने नवीनका नाममा ३०९ र ३१५ नम्बरका दुई कित्ता जग्गा थियो । माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी र मचाबाबु प्रजापतिका नाममा रहेको ३०९ कित्ताको एक पैसा एक दाम जग्गामा २०६१ मंसिर २४ मा प्रजापतिले ‘छोडपत्र’ गरे । छोडपत्र गर्नु भनेको आफ्नो हक छाड्नु हो । त्यसमा पनि सानो टुक्रो जग्गा सुवेदी र ढकाल्नीका नाममा मात्रै आयो । एक महिनापछि पुस २९ मा त्यो जग्गा सुवेदी र ढकाल्नीले नवीनलाई ‘बेचे’ ।
नवीनले आफ्ना एक साथीमार्फत कान्तिपुरलाई पठाएको प्रतिक्रियामा आफूले जग्गाको कैफियतबारे बुझेको र त्यसमा कुनै खोट नदेखेपछि किनेको उल्लेख छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि नै उनले भनेका थिए, ‘जग्गा खरिद गर्दा दिनेको लालपुर्जा छ कि छैन, फिल्ड दुरुस्त छ कि छैन, क्षेत्रफल मिल्छ कि मिल्दैन हेर्ने हो । जग्गाको इतिहास कोट्याइँदैन ।’ अख्तियारलाई अस्ट्रेलियाबाटै बयान दिने क्रममा भने उनले जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गर्न मञ्जुरी दिएका थिए ।
रेग्मीका नाममा कसरी गयो ?
रेग्मीले न्यायाधीश रेग्मीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई कानुनी सहयोग गरेको र त्यसको ‘फी’ जग्गाबाट मिलाएको प्रतिक्रिया कान्तिपुरलाई दिएका थिए । अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार रेग्मीले बयान नभई बाटो प्रयोजनका लागि छाडेको जग्गा सरकारका नाममा गर्न मञ्जुरी रहेको भनी निवेदन दिएका थिए ।
२६ माघ २०७६, आईतवार को दिन प्रकाशित
#जग्गा प्रक्रिया मिचेर
#रेग्मी र पौडेल